သောက်တော်ရေကပ်ထားရာမှ စွယ်တော်အရိပ်ပေါ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သောက်တော်ရေကပ်ထားရာမှ စွယ်တော်အရိပ်ပေါ်ခြင်း
Posted by etone on Nov 24, 2011 in Myanma News, Opinions & Discussion | 37 comments
မနေ့ညက အိမ်ရောက်တယ်ဆိုလျှင်ပဲ … မကြုံစဖူး လူစုံတတ်စုံ ၀ိုင်းထိုင်စကားပြောနေကြတာ မြင်လိုက်ရပါတယ် ။ သူတို့ ဘာပြောမှန်းလည်း ကျွန်မမသိ ၊ သိလည်း မသိချင်ပေမယ့် ကျွန်မပြန်ရောက်လာတာမြင်တော့မှ အားလုံးမျက်နှာပိုးသပ်ပြီး အသံမထွက်ကြတော့ပဲ ပြုံးစိစိလုပ်နေကြပါတယ် … ။ ဒါဆိုသေချာပြီလေ ကျွန်မအကြောင်းပြောနေကြတာပေါ့ ။
ဒါနဲ့ သူတို့ဘာပြောနေကြသလဲ အစ်လိုက်တော့ … မင်္ဂလာဒုံမှာ သောက်တော်ရေခွက်ထဲက စွယ်တော်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပြောနေကြတာပါတဲ့ လေ… ။ ထစ်ခနဲဆို စာရေးပြီး ပို့စ်တင်မယ် စိတ်ကူးတတ်တဲ့ ကျွန်မကို မကြားစေချင်တာလည်း ပါတာပေါ့ … ။ ကျွန်မအစ်ကိုက ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် သုံးလေးခုမှာ ဂျာနယ်လစ် လုပ်နေတာကြောင့် သူသတင်းသွားယူခဲ့တဲ့ ဆွယ်တော်အကြောင်းပြောနေကြတာပါ…. ။ မင်္ဂလာဒုံက အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ ဘုရားသောက်တော်ရေ ကပ်တဲ့ခွက်ထဲမှာ စွယ်တော်ပုံလေးပေါ်နေပါသတဲ့လေ … ။ တနေ့က ညကတည်းက ပေါ်နေတာကြောင့် လူအများသွားရောက်ဖူးမျှော်ကြပါတယ် … ။ ကျွန်မလည်း မယုံတ၀က်ယုံတ၀က်နဲ့ ဘယ်မှာလဲ ဓါတ်ပုံပြဆိုတော့ သူရိုက်လာတဲ့ဓါတ်ပုံကို ပြပါတယ် …. အဲ့ဒါမြင်တော့မှ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲ အံ့သြခဲ့ပါတယ် … ။ သူ့ဓါတ်ပုံလေးငါးဆယ်ပုံဆိုတော့ ကျွန်မကို တစ်ပုံလောက်ပေးပါလား ရွာထဲမှာ ပြန်ပြချင်လို့ဆိုတော့ … မပေးပါဘူးတဲ့လေ … ။ သူလည်း ဂျာနယ်တိုက်တွေကိုပေးရမှာ ဆိုက်ထဲမှာ အ ရင်တင်ပြီးပုံ ဂျာနယ်ထဲပါလာလျှင် မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး ဘယ်လိုတောင်းတောင်းမပေးဘူးတဲ့လေ … ။ အိမ်ကလူတွေရယ်နေကြတာကတော့ အစ်ကိုက ဂျာနယ်တွေမှာ သတင်းရေးတယ် ၊ ညီမကလည်း ဟုတ်တာရော ၊ မဟုတ်တာပါ … အင်တာနက်ထဲ တက်တက်ဖွတယ် … မိဘတွေက ၀ါသနာ မပါလာသလောက် … သူတို့ကတော့အတော်ဝါသနာပါတဲ့ မောင်နှမဆိုပြီး ပြောနေကြတာပါ … ။
ဒါနဲ့ သူရိုက်လာတာ ကင်မရာထဲမှာရော ဖုန်းထဲမှာပါတွေ့တော့ …. သူအိပ်နေတုန်း သွားခိုးဖို့ လုပ်ပါသေးတယ် ။ ဟီး .. ဟီး သူကလည်း ကျွန်မအကြောင်းကို သိတော့ …အတော် နပ်တဲ့လူပဲ … အိပ်တာတောင် ဖုန်းနဲ့ ကင်မရာကို ခေါင်းအုံးအောက်ထဲံထည့်ပြီးအိပ်တယ် … တရေးနိုးသွားထကြည့်လည်း လုံးဝနေရာမရွှေ့ဘူး … ။ ဒါနဲ့ ကျွန်မဓါတ်ပုံ ခိုးလို့မရခဲ့ပါဘူး … ။
စိတ်ဝင်စားလို့ ကိုယ်တိုင်သွားဖူးချင်တယ်ဆိုလျှင် မင်္ဂလာဒုံရောက်တဲ့ ဘာကားပဲစီးစီး စပယ်ယာကို မေးလိုက်တာနဲ့ ဘယ်မှာဆင်း ဘယ်ကိုလမ်းလျှောက်ဆိုပြီးလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ် … တရုတ်ပြည်က စွယ်တော်ကြွနေစဉ်အတွင်းမှာ ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်တာကြောင့် လူအများသွားရောက်ဖူးမျှော်ကြပါတယ် … ။ အလှည့်ကျ တန်းစီပြီးမှ ဖူးမျှော်ခွင့်ရတာပါတဲ့လေ … ။ မနက်ခြောက်နာရီလောက်က တန်းစီလျှင် ရေခွက်ထဲက စွယ်တော်ရိပ်ကိုမြင်ရဖို့ ရှစ်နာရီလောက်မှ ရောက်ပါသတဲ့ … အဲ့ဒီလောက်တောင် လူများအောင် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေရှိနေတတ်ကြောင်းကို ဒီစွယ်တော်ရိပ်က သက်သေထူနေပါတော့တယ် ။
တရုတ်ပြည်မှ ကြွလာတဲ့ ဆွယ်တော်ကို ဖူးချင်လျှင်တော့ ကမ္ဘာအေးကို သွားဖူးလို့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သတိပြုရမှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းအပါဝင် ဘာပစ္စည်းမှ အတွင်းကို ယူဆောင်ခွင့်မရှိပဲ လုံခြုံရေးကို အပ်ထားရပါသတဲ့ … ။ ကျွန်မအစ်ကိုသွားဖူးတုန်းကတော့ ဖုန်းအပ်ထားတာ စိတ်မချလို့ ကဒ်ကိုဖြုတ်ပြီး အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်လာရပါသတဲ့လေ … ။ သူ့ရဲ့ ဂျူနီယာတစ်ယောက်သွားဖူးတုန်းက ဖုန်းကို ကဒ်မဖြုတ်ပဲ ထားခဲ့တာ …. ဖုန်းခိုးဆက်ထားတာတွေ တွေ့လိုပါတဲ့လေ … ။
စွယ်တော်အရိပ်ပေါ်တဲ့ပုံလေး သူ့ဆီက တိုလို့ရလျှင် ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် … ။ အခွင့်ခါ သင့်လို့ ကိုယ်တိုင်သွားဖြစ်မယ်ဆိုလျှင်လည်း … ရိုက်တင်ပေးပါဦးမယ် ။
ဒါကတော့ ဓါတ်ပုံထုတ်ပြီးသားကို လက်ကကိုင်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတာပါ .... ။
သူကအထူးဆန်းဆိုလျှင် ဓါတ်ပုံအဖြစ် ကူးထားတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကြောင့် ... သူ့စာအုပ်စင်ကို မွှေနှောက်ရှာပြီး .... တပုံတွေ့လို့ ... ဟီးဟီး
ချစ်ရင်ထူ ရေးထားတာ တိတိကျကျ ရေးထားပေမဲ့ ယုံ ရခက်ခက်ဖြစ်နေတာ အိတုံ အကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်လာတယ်ဆိုတော့ ယုံ ရတော့ မယ်နဲ့ တူတယ်။ ဂျာနယ်တွေ ရောင်းကောင်းပြီး အလူငွေ လည်းပိုတက်လာတော့မယ်။
အကို့ပုံ ဂျာနယ်မှာ ပါပြီး ရင် တင်ခွင့်တောင်းပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် … ကျွန်မလည်း လက်တွေ့မမြင်ရလျှင် ယုံမယ့်အမျိုးစားထဲက မပါလို့ … ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးမှ …အဲ ဟုတ်ပါလား ဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်တာပါပဲ … ။ ရေအရောင်မှာ အထဲက လေခိုပြီး လေဘောလုံးလေးဖြစ်နေကာ … စွယ်တော်အရောင်ကလည်း ပုလဲဝါရောင်ဖြစ်နေပါတယ် … ။ ဒါလေးမြင်တော့ တကယ်ပါလား လက်ခံရတော့တယ် … ။
ဓါတ်ပုံခိုးလို့ရဖို့ ဒီနေ့ညထပ်ကြိုးစားပါဦးမယ် …. ။
ရအောင်ခိုး မမetoneရေ လိုအပ်ရင်အိပ်ဆေးနည်းနည်းတိုက်လိုက်
မအိတုန်က ၃/၄ ဂျာပိုင် ဂျာနလစ်ကြီးရဲ့ ညီမကိုး
ဒါကြောင့် သတင်းကောင်းတွေ ရှိနေတာ
ဂျာနယ်မှာ ပါတဲ့ပုံ ကြည့်ပြီးပြီနော် ….အိပ်ဆေးတိုက်နဲ့တော့ ………..
မမetone အကိုက ကလေးမှမဟုတ်တာ
မမ etone …ဘာပစ္စည်းမှ မယူသွားရဘူး…phone ကော camera ကော ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီး …မမ etone အစ်ကို ကဘယ်လိုဓါတ်ပုံရိုက်လာတာတုန်း…အဲဒါလေးလည်း နဲနဲရှင်းပြပေးပါဦး…
မိလုံးရေ စာကို သေချာပြန်ဖတ်ပါကွယ် ။ ပြောထားတာက စွယ်တော်အရိပ်အကြောင်းပါ ။ အဲ့ဒါက မင်္ဂလာဒုံမှာ ။
ဘာမှ ယူသွားလို့မရတာက ကမ္ဘာအေးက တကယ့်စွယ်တော်သွားဖူးတဲ့အခါပါ …။
သြော်…အင်း…ဟုတ်သားပဲ…ဟိဟိ…mian hae eonni … sorry sister… duibuqi jiejie…:)
အခုပဲ အီးမေးထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ရောက်လာတယ် ဖိုရမ်မှာ တင်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်အုန်းမယ်။
အီးမေလ်းထဲမှာတော့ပုံတွေရထားပေမယ့် သိပ်မကြည်ဘူး အလင်းပြန်နေသလိုပဲနော် … ကိုယ်တိုင်တော့သွားစပ်စုချင်တယ် … ရုံးပိတ်ရက်မှ …
တစ်ဂယ်ဆို ဂဘာကျော် စွယ်တော်ပဲ.
တင်ပြီးသွားပြီ.. ကိုယ်တိုင်တော့ သွားကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ဒီလိုပဲ သိချင်ကြရင် မြင်ရအောင် တင်ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။
သဂျီးတော့ ငရဲအိုး ဂျိုးကပ်တော့မှာပဲ… သွပ် သွပ် သွပ်…..
သူ့နာမည်က ချင့်ယုံ တဲ့။
စွယ်တော်ဖူးချင်ရင် ကမ္ဘာအေးမှာ သွားဖူးတာ ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ။
ဘယ်နှယ့် ဖန်ခွက်ထဲပေါ်တဲ့ အရိပ်ကို သွားဖူးရမယ်လို့။
တစ်ခုခုဆို ကျွန်တော်တို့ ရွာကတရုတ်ကြီးကို သတိရပါဗျို့။
အဲ.. ကိုချောကလက်ကြီးရေ … ကမ္ဘာအေးက စွယ်တော်က ဟပ်ချလောင်းဆိုပြီး ပျောက်မသွားဘူးလေ.. … ရေခွက်ထဲကဟာက ပျောက်သွားနိုင်တာဆိုတော့ … ဟီးဟီး .. ဖူးချင်တာထက် စပ်စုချင်တာက များတယ် ဟုတ်မဟုတ်လည်း သိချင်သေးတယ် … ။ မြင်ရတဲ့ပုံထဲမှာတော့ … အတော့်ကို တူနေတာ … ။ (သက်သေပြချင်ပါတယ် ခိုးလို့မရသေးလို့… )
ဘယ် လောက်ကြာထိ ပေါ် နေမယ်ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ပေါ် နေတာ က တော့
မနှိုင်းကောင်း ပေမဲ့ ဂေါ်လီဖန်လုံး ထဲ အရိပ်လို မျိုး၊ ရေမရှိရင် ဘာ မှ မပေါ်ဘူး။
ရေ ကပ်ထား ထည့်ထားမှ ပေါ်တာ။
အခု ရေသန်.ဘူး ဘူးကြီးနဲ. နေရောင်မှာ ထောင်ကြည်.ရင် ဘုရားပုံတော်ပေါ်နေတယ်လို.ပြောတယ် ကျနော်တော.မစမ်းရသေးဘူး ရွာထဲကလူတွေစမ်းကြည်.ကြပါလား
အဲ့ဒီသတင်းကတော့ ပျံ့ နေပါတယ် … ကျွန်မတို့ ရုံးမှာတောင် လုပ်ကြည့်ကြသေးတယ် … အခုအဲ့ဒီအကြောင်းလေး တင်ပေးဖို့လုပ်နေပါတယ် .. ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျွန်မလည်း မဝေခွဲတတ်ဘူး …. ။
ရေအပြည့်ရှိတဲ့ ရေသန့်ပုလင်းကို နေပူထဲမှာ ထောင်ကြည့်ရင် ပုလင်းက တံဆိပ်အပတ်မှာ အလင်းရောင် အရိပ် ပေါ်ပါတယ်။ ထင်ထင်ရှားရှားပါ။ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ ခါတိုင်းမကြည့်ပဲ ဒီနေ့မှ ကြည့်တာမို့ နောက်နေ့မှ ဒီလို ပေါ်မပေါ် ထပ်ကြည့်ရဦးမယ်။
အထူး အဆန်းဆို အလုအယက် ကြိုက်တတ်ကြတာ ကျွန်တော်တို့ပါ
ဘာတဲ့ ရေထဲမှာ စွယ်တော်အရိပ် ပေါ်သတဲ့
ကဲ အဲသည်တော့ ဘာဖြစ်သတုံးဗျာ..
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓက ဂေါတမ ဗုဒ္ဓပဲ
ခင်ဗျားတို့ လျှပ်စစ်မီးရအောင်လုပ်ပေးလို့ ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး
ခင်ဗျားတို့ စီးပွားတက်အောင်လုပ်ပေးလို့ ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး….
ကျုပ်တို့ ဂေါတမဗုဒ္ဓက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကိုးကွယ်ရာတဲ့
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းက သွားမှ ရမတဲ့
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူမှားရင် တစ်သံသရာလုံးသွားရောပဲတဲ့….
စွယ်တော်ရိပ်လေး ရေပေါ် ပေါ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်နိုင်မလား စဉ်းစားကြဦး
ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓက သူ့ကို ကိုးကွယ်ဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး
သူညွှန်ပြတဲ့ လမ်းကို လျှောက်ကြဖို့ ဆုံးမတာ…
ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်အားကိုးတဲ့ ကြည်ညိုတဲ့ နေရာမှာ
ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးတွေ ကနေ ကြည်ညိုရမှာ ပူဇော်ရမှာ.
အရဟံ.. ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
အရဟံ အစရှိသော ကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုး ပူဇော်ပါ၏။
အဲ ရွာသားတွေကို ပြောတာ ဟုတ်ဝူးနော်
တခမ်းတနား သွားနေကြတဲ့ သူတွေကို ပြောတာပါ…
ကိုမင်းပြည့်ရှိန်ရေ … ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေက အရမ်းစပ်စုတာ ၀ါသနာပါတယ်မို့လား ။
ခွေးအချင်းချင်း ကိုက်လျှင်လည်း ၀ိုင်းကြည့် ၊ သူများ မိသားစုရန်ဖြစ်လျှင်လည်း ထွက်ကြည့် ၊ နောက်ဆုံး …. တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေသူ … သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူ ပြောင်ပြောင်ယောင်ယောင်ဖြစ်လျှင်တောင် လိုက်ကြည့်တတ်တဲ့ အမျိုးမို့လို့ …တခုခုဆို လူအုံကြတာ မဆန်းပါဘူး … ။ ဒီတော့လည်း သွားကြည့်ချင်ကြမှာပေါ့ လေ… အပြောနဲ့မယုံပဲ လက်တွေ့ မြင်မှ ယုံတတ်တဲ့ လူတွေကလည်း များတာကိုး … ။
ဖေ့ဘွတ်မှာတော့ ပလူပျံနေတာပဲ ရေသန့်ဘူး နေရောင်မှာ ကြည့်ပြီး ပေါ်တဲ့ ပုံတွေ တင်ထားတာ လူပေါင်းမနည်းဘူး။
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးလေ .. အချွန်လေးတော့ဖြစ်နေတာပဲ … ။
That shape is reflected by the bottom of the water bottle . I think, that’s reflection of light.
အလင်းပြန်တဲ့ အရိပ်တော့ဟုတ်ပေမယ့် … သူ့မှာ ရေခွက်ထဲ လေဟာနယ်လိုမျိုး အလုံးလေးဖြစ်ပြီး တည်နေတာကတော့ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ် … ။
ပြောချင်တာက ရေသန့်ဗူးထဲမှာ စွယ်တော် အရိပ်ပေါ်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောချင်တာပါ … မှားရေးမိတဲ့အတွက် post တင်တဲ့သူကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် …
သဂျီးမင်းတော့ ဒီတစ်ခါ ပြန် မပြောနိုင်တော့ပါဘူးကွယ် ဒန် တန် တန်…..း)
သဂျီးမင်းက ဒီမှာသာ မပြောနိုင်တော့တာ … တခြားပို့စ်မှာ ရေဗူးမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပုံလေးတောင် လာဆွဲပေးသွားသေးတယ် ဟား ဟား ။
အဲဒါလေ ရေသန့်ဗူးကိုနေရောင်ပေါ်မှာထောင်ကြည့်တော့ စွယ်တော်အရိပ်ကိုမြင်ရတယ်ဗျ မန်းလေးမှာတော့အကုန်ရေသန့်ဗူးထောင်ပြီးနေရောင်ထဲကြည့်နေကြတာ……
မမအိတုံက ဓါတ်ပုံရအောင် အိပ်ဆေးတိုက်ပြီးယူရမှာ။အမ ရေ….သောက်တော်ရေခွက်ထဲမှာ စွယ်တော်ပုံပေါ်လို့ 
ခိုးရှာတာ … ဓါတ်ပုံကူးပြီးသား တပုံတွေ့လို့ ….တင်ပေးလိုက်ပါတယ် … ။
အပိုင်း(၁၀)အိမ်အမှတ်(၂၀၂) မဉ္ဖူသကလမ်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ။။က အိမ်မှာ ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ် ဗျ
တရုတ်ပြည်က ပင့်လာတဲ့ စွယ်တော်အစစ်ကို အရမ်းအရမ်းအားနာမိတယ်။
အဲသည်ဖန်ခွက်ရဲ့ နောက်နားက မြသပိတ်ကြီးကိုရွှေ့လိုက်ရင်ရော
ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ မျက်လှည့် ဘာသာတို့ ကို စည်းခြားပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက စေတီထိုက်တာတွေကို ကိုးကွယ်
မျက်လှည့်ဘာသာဝင်တွေက ထူးဆန်းတဲ့ သဗ္ဗလနံ အကုန်တွေ့တွေ့သမျှ ကိုးကွယ်ကြပေါ့။
သပိတ်ရွှေ့တာတင်မဟုတ်ပဲ … ရေတောင် သွန်ပြသေးတယ်ပြောတယ် .. … ။ လက်တွေ့မြင်မှယုံမယ်ဆိုလျှင်တော့ … နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ သက်သေထူပါတော့ … ။
ခါတော်မှီ အဖြစ်ပျက်လား ။ ခါတော်မှီ လုပ်စားခြင်းလား ။
ကိုယ်တိုင်မကြုံရတော့လည်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး ။